mas’uuliyiin ka tirsan G/Banaadir oo ka qeyb galay kulan looga hadlayay amaaanka “sawirro” | Radio Muqdisho
mas’uuliyiin ka tirsan G/Banaadir oo ka qeyb galay kulan looga hadlayay amaaanka “sawirro”
Published on January 13, 2013 by admin · 2 Comments · 4,723 views
Kulan looga hadlayay arrimaha amaanka, nadaafadda, deriseenta iyo canshuurta oo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay dagmada Hodan ee magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir.
Kulankan oo ay ka soo qeyb galeen madaxda gobolka Banaadir sida gudoomiyaha Gobolka Banaadir , agaasimaha xiriirka dagmooyinka gobolka, afhayeenka maamulka gobolka qaar ka mid ah guuddomiyeyaasha dagmooyinka gobolka, iyo haween ka kala socday dagmooyinka gobolka Banaadir.
Intii uu socday kulanka ayaa waxaa hadal ka jeediyay qaar ka mid ah haweenkii ka qeyb galay waxa ayna sheegeen in haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diyaar u yihiin wax qabad dhab ah si dalka looga saaro marxalada uu ku jiro.
Gudoomiyaha dagmada Hodan Cabdi Maxamed “Dhabaney” oo marti loo ahaa ayaa hadal uu jeediyay kusharaxay in shacabka reer hodan ay yihiin dad isku xiran, hadaan lahelin iskaashiga bulshadana aan wax hagaagay jirin.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” oo soo xiray xafladda ayaa sheegay in shacabka ay kudhex jiraan dhagar qabeyaal ka tirsan maleeshiyada kooxda shabaab sidaas daraadeed shacabka looga baahanyahay in ay la shaqeeyaan hay’adaha amaanka si loo sugu amnigooda.
Kulankan ayaa ahaa mid uu maamulka gobolka Banaadir ay ugu talagaleen in dagmooyinka gobolka lagarsiiyo shirarka ceynkan oo kale ah si ay wada shaqeyn ay u yeeshaan dhamaan dagmooyinka gobolka Banaadir.
Wadaniga dhabta says:	January 13, 2013 at 7:04 pm	Maasha Allah waa hurumar loo baahan yahay belse waxa haboon in hurumarka laga wada gaarsiiyo dhamaan degmoooyinka caasimada waxa degmooyin ay ka jiraan amni daro oo ay ka midyihiin degmada Kaaaraan iyo kuwa kale waxay weydiin lahaa gudoomiye degmada Kaaraan miyaysan Muqdisho ka tirsaneyn? oo Maxaa u diiday humarka iyo amniga iyo nadaafada
Reply »	husein ahmed says:	January 14, 2013 at 4:49 am	Dr Tarsan waa fiicantahay saad u daadihineysid howlaha Gobalka guuleyso guuleyso weigaa.